Ny fisie CSV dia fototra ary matetika no ambany indrindra iraisan'ny fampidirana sy fanondranana data avy amin'ny rafitra rehetra. Miara-miasa amin'ny mpanjifa iray izahay izao izay manana tobim-pifandraisana lehibe dia lehibe (firaketana mihoatra ny 5 tapitrisa) ary mila manivana, manontany ary manondrana subsegment ny data izahay. Inona ny rakitra CSV? Ny rakitra soatoavina nosarahina koma dia rakitra an-tsoratra voafetra izay mampiasa koma mba hanasarahana soatoavina. Tsipika tsirairay avy